I-EA020 - I-OMG Wireless Motion Sensor Pager - Uhlelo lwe-Alarm Yasekhaya - $ 168 - Izixazululo ze-OMG
I-Easy to Use Careerver Alert!
Awekho umsindo eNkampanini!
I-Alarm Ephumayo yokuphumayo i-Motion Sensor ephumayo igxuma umsindo emgodini wombhede noma ekamelweni, okungenzeka kube yinkinga kubahlali esikhundleni sokuxwayisa umnakekeli ngokusebenzisa i-pager.
Umnakekeli uyaziswa nge-pager
I-Smart Caregiver EA020 Caregiver Pager With Motion Sensor Alarm yabantu asebekhulile yazisa umnakekeli womsebenzi wabahlali nge-pager lapho isakhamuzi sesizovuka embhedeni, esihlalweni noma siphume egumbini.
Beka lapho udinga khona
Amandla we-AA (3) AA (angahlanganisiwe) noma i-adapter ye-AC yokuzikhethela i-Alarm Motion Sensor ingafakwa eceleni kombhede noma emnyango. Lapho insimu yenzwa ithola ukunyakaza umshini wokugudluza usebenze - ukwazisa umnakekeli.
Ukuthula - Azikho iziqapheli ezesabekayo
Kulula ukusetha - faka amabhethri futhi ulungele ukuyisebenzisa
Iphakethe elincane le-pocket - Lulula ukuthwala
I-Alarm Sensor Alarm ingafakwa ngombhede noma umnyango wokuqapha imisebenzi yezakhamuzi
Ukubuka okuphelele kwe-5081 Ukubuka kwe-1 Namuhla